Myanmar Model Girls: အဆိုတော်လင်းလင်း ဟာ ခ်ျသူဝေကို မပြောဘဲ သိန်းရာချီသုံွးဲလိုက်သောအခါ မိန်းမဖ်ြတဲ့ ခ်ျသူဝေရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်က.....!
အဆိုတော်လင်းလင်း ဟာ ခ်ျသူဝေကို မပြောဘဲ သိန်းရာချီသုံွးဲလိုက်သောအခါ မိန်းမဖ်ြတဲ့ ခ်ျသူဝေရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်က.....!
မကြာခင်မှာ မွေးဖွားတော့ မဲ့ အမြွာလေးတွေရဲ့ မေမေ ဖ်ြတဲ့ ခ်ျသူဝေ နှင့် ဖေဖေဖ်ြတဲ့ လင်းလင်း တိုံ့တွဲဟာ ပရိသတ်တွေ အားကျလောက်အောင် လိုက်ဖက်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ ဖ်ြပါတယ်။ တ်ဦးနှင့် တ်ဦး နားလည်မှု အပြည့်ရှိသလို အရမ်းခ်ျကြတဲ့ သူတို့ န်ှယောက်ဟာ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း န်ှခေါက်မပြောရသလို သဒ္ဒါတရား ထက်သန်တဲ့ သူတွေပါ။ လင်းလင်း ကတော့ သူ့ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာ မန္တလေးက ဘိုးဘွားရိပ်သာ က လိုအပ်ချက်တွေရယ် အကူအညီလိုအပ်တာတွေရယ်ကို ပြောပြီး အကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။
ထိုရိပ်သာဟာ မန္တလေး ရေတံခွန်တောင်ကနေ ထပ်တက်သွားရတဲ့ ထူမတောင် အပေါ်ဆုံးနားမှာ မန်ှက လင်းလင်းတို့ သူငယ်ချင်းရောင်ရင်းတွေုပေါင်းမတည်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်ထားတဲ့ ဘိုးဘွာရိပ်သာ (ွန့်ပ်ဘိုးဘွားရိပ်သာ) မှာ လိုအပ်ချက်တွေမျာွးာရှိတဲ့အတွက် ခ်ျသူဝေ နှင့် သူ တို့ လင်မယားန်ှယောက် သိန်း ၁ ၀ လောက်ကျမယ့် အဆောက်အအုံ့ကို လှူဒါန်းမှာဖ်ြတယ်လို့ပြောထားပြီး လိုအပ်ချက် တွေအများကြီးရှိတဲ့ အတွက် တက်နိုင်တဲ့ သူတွေရှိရင် လည်း အနည်းနှင့် အများဆိုသလို သွားရောက်လှူဒါန်းဖို့နှိုးဆော်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
သို့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ ( ကဲ မိန်းမရေ ,, ညည်းကိုမတိုင်ပင်ဘဲ အလှူတ်ခုလုပ်လိုက်ပြီ, ညည်းလဲ န်ှခါမပြောရဘူးဆိုတာသိပြီးသားပါ, ညည်းကိုကျုပ်ခနခနပြောတာ မှတ်မိလား, ကျုပ်တို့တွေ ကားကောင်းတွေီး တိုက်ကြီးပေါ်နေပြီး ကြုံရတဲ့ ဘဝအပူကဘာမို့လို့လဲကွာနော်, ဒီနိုင်ငံမှာ ဘဝဆိုးအပူ မျိုးံနဲ့ လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လေ နော် ) ဆိုပြီး ခ်ျသူဝေကို အသိမပေးဘဲ လှူဒါန်ူခဲ့သော်လည်း ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်တဲ့အပြင် ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖ်ြတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူမဟာလည်း ပါရမီဖြည့်ဘက်အနေနှင့် 'သာဓုပါယောက်ျားရယ် အဖိုးအဖွားတွေကို လှူရတာမင်္ဂလာပါလေ' ဆိုပြီးပြန်ပြောထားပါတယ်။ ဒီလင်မယားကတော့ လိုက်လဲလိုက်ပါပေ့။
18+ ဗွီဒီယိုများကြည့်လိုလျှင် ဒီမှာနှိပ်ပါ။
Credit - www.myanmarstars.net